စာပေဆောင်းပါး | ဟန်ဆန်း
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဖြင့် အစတည်ခဲ့သော ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၂၉ နှစ်တိတိ ပြည့်မြောက်ခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။ ၂၉ နှစ်တိတိပြည့်မြောက်သောနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စာရေးဆရာ ဦးလှဝင်း(လေသူရဲတစ်ဦး)၏ ရေစုန်နှင့်ရေဆန် စာအုပ်ထွက်လာသည်။
October 16, 2017 in စာပေ, စာပေဆောင်းပါး, စာအုပ်, ဆောင်းပါး.
နေမျိုးကြီး ကဗျာတွေ ဖတ်မလား ဆိုသော စာသားအစုအဖွဲ့သည် ကဗျာဆရာနေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော လူဖြစ်ရတာ ကောင်းတယ် ကဗျာအတွင်းမှ ဖြစ်ပါသည်။
ဝတ္ထုတိုဆိုသော စာပေအမျိုးအစားကို ပထမဦးဆုံးဖော်ပြသောမဂ္ဂဇင်းသည် သူရိယမဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝတ္ထုတိုမှာ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း၏ မောင်သိန်းတင် မသိန်းရှင် ဖြစ်ပါသည်။
March 16, 2017 in ၀တ္ထုတိုဗေဒ, စာပေ, စာပေဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး.
သူလိုကိုယ်လို အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ယောင်ဟေးအကြောင်းကို ခင်ပွန်း၊ ခယ်အိုနှင့် အစ်မဖြစ်သူတို့က ဇာတ်ကြောင်းပြန်ကြသည်။ ယောင်ဟေး သည် ဘယာစီယာဝတ်တတ်သူ မဟုတ်သည်မှလွဲ၍ သာမန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသာဖြစ်သည်။
စာပေနိုဘယ်ဆု၏ ၁၁၅ နှစ်သောသက်တမ်းအတွင်းမှာ ဂီတသမား၊ သီချင်းရေးဆရာတစ်ဦးအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံးစာပေ နိုဘယ်ဆုရသူသည် ဘော့ဒီလန်ဖြစ်လာပါသည်။ ဂီတသမားတစ်ဦးကို စာပေနိုဘယ်ဆုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကမ္ဘာ့စာပေလောကမှာ ရိုက်ခတ်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။
October 14, 2016 in စာပေ, စာပေဆောင်းပါး, ဆိုသူမှာ.
ဝတ္ထုတိုမျိုးဆက်သစ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကို ပထမဦးဆုံးမြန်မာဝတ္ထုတိုဖော်ပြခဲ့သော သူရိယမဂ္ဂဇင်းက ဝတ္ထုတိုခရီးအစတွင်ပင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
October 11, 2016 in ၀တ္ထုတိုဗေဒ, စာပေ, စာပေဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး.
၁၉၁၇ ခုနှစ် မတ်လထုတ် သူရိယမဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁)တွင် မောင်သိန်းတင် မသိန်းရှင် အမည်ရသောဝတ္ထုတို စတင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရေးသူမှာ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းဖြစ်သည်။
October 5, 2016 in ၀တ္ထုတိုဗေဒ, စာပေ, စာပေဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး.
‘‘အသည်းကွဲတစ်ယောက်ရဲ့ စွန်’’စာအုပ်မှ ဝတ္ထုများကို ဖတ်ရှုခြင်းရသ
‘‘အသည်းကွဲတစ်ယောက်ရဲ့ စွန်’’စာအုပ်တွင်ပါရှိသည့် ဝတ္ထုများတွင် အောင်မြင်ခြင်း၊ တစ်စုံတရာပြီးမြောက်ခြင်းနှင့်လွတ် မြောက်ခြင်းများကို အလျဉ်းမတွေ့ရပါဘဲ ဘဝကို တိုက်ပွဲဝင် ရုန်းကန်နေရခြင်း၊ အရှုံးပေးရခြင်းနှင့် ကြေကွဲနေရခြင်းများကိုသာ အထင်အရှားတွေ့ရသည်။
July 25, 2016 in စာပေ, စာပေဆောင်းပါး, စာအုပ်, ဆောင်းပါး.
အာရာဗင်း အဒီဂါ ဆိုသူမှာ
အာရာဗင်း အဒီဂါ(Aravind Adiga)ဆိုသူမှာ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ဩစ‌တေးလျနိုင်ငံသား စာ‌ရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ The White Tiger (ကျားဖြူ)စာအုပ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့စာ‌ပေအသိုင်းအဝန်းတွင် ထင်ရှားလာသူဖြစ်သည်။
September 5, 2015 in စာပေဆောင်းပါး, ဆိုသူမှာ, ဆောင်းပါး.
ယန် မာတဲလ် ဆိုသူမှာ
ယန် မာတဲလ်(Yann Martel) ဆိုသူမှာ က‌နေဒါနိုင်ငံသား စာ‌ရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Life of Pi စာအုပ်သည် မာတဲလ်၏ ထင်ရှား‌သော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။
August 24, 2015 in စာပေဆောင်းပါး, ဆိုသူမှာ, ဆောင်းပါး.
အီးအဲလ် ဒေါက်သရိုး ဆိုသူမှာ
၂ဝ ရာစုအတွက် အ‌ရေးပါသော အ‌မေရိကန်စာ‌ရေးဆရာများထဲတွင် ‌ဒေါက်သရိုးသည် အလွန် အ‌ရေးပါသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
August 10, 2015 in စာပေဆောင်းပါး, ဆိုသူမှာ, ဆောင်းပါး.
ခံစားမှုဆိုတာ ကဗျာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ကဗျာဆိုတာ ပညာရပ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်
ကဗျာက အလိုလိုဖြစ်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ နားလည်ဖို့ လက်ခံဖို့ လိုလာပြီ။ ခံစားမှုဆိုတာ ကဗျာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် ကဗျာဆိုတာ ပညာရပ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူ့နောက်မှာ ဝိုင်းဝန်းနေတဲ့ အတတ်ပညာရှိတယ်။
June 29, 2015 in စာပေဆောင်းပါး, စာပေအတွေး, ဆောင်းပါး.
အီးအဲလ် ဂျိမ်း ဆိုသူမှာ
အီးအဲလ် ဂျိမ်း(E. L. James) ဆိုသူမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသူ စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Fifty Shades of Grey စာအုပ်ဖြင့် အောင်မြင်ထင်ရှားလာသည့် စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်။
June 27, 2015 in စာပေဆောင်းပါး, ဆိုသူမှာ, ဆောင်းပါး.
ဆဲလ်မာ လော့ခ်ဂေလော့ဖ် ဆိုသူမှာ
ဆဲလ်မာ လော့ခ်ဂေလော့ဖ်(Selma Lagerlof) ဆိုသူမှာ ဆွိဒင်နိုင်ငံသူ စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်။ စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကို ပထမဦးဆုံးရရှိသော အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမဖြစ်သည်။
June 5, 2015 in စာပေဆောင်းပါး, ဆိုသူမှာ, ဆောင်းပါး.
ဆစ်ဂါတ် အန့်ဆက်စ် ဆိုသူမှာ
ဆစ်ဂါတ် အန့်ဆက်စ်ဆိုသူ စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုရရှိထားသူ အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမဖြစ်သည်။ နော်ဝေနိုင်ငံသား စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စာပေနိုဘယ်ဆုကို တတိယမြောက်ရရှိထားသည့် အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမဖြစ်သည်။
May 26, 2015 in စာပေဆောင်းပါး, ဆိုသူမှာ, ဆောင်းပါး.
ရုရန်ဒဲလ်(Ruth Rendell)ဆိုသူမှာ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသူ စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လျှို့ဝှက်သည်းဖိုဝတ္ထု၊ စိတ္တဗေဒဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဝတ္ထုများဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်။
May 22, 2015 in စာပေဆောင်းပါး, ဆိုသူမှာ, ဆောင်းပါး.